अख्तियार जान किन हुन्छ प्रहरीमा होडबाजी ? – Online National Network
अख्तियार जान किन हुन्छ प्रहरीमा होडबाजी ?
५ भाद्र २०७४, सोमबार ०४:३७
काठमाडौं, ५ भदौ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा हुन प्रहरीमा होडबाजी चल्ने गरेको छ । महाभियोग लाग्दालाग्दै अदालतको फैसलाबाट बर्खास्त भएका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले अख्यिारमा प्रहरी दरबन्दी ६ गुणाले वृद्धि गराएका थिए । दरबन्दी बढेसँगै अख्तियारमा पोस्टिङ खोज्दै राजनीतिक ‘सोर्स’ र अख्तियारकै ‘कृपा’ खोज्ने प्रवृत्ति प्रहरीमा बढेको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले साउन ३२ गते डीएसपीको सरुवा र पदस्थापन गर्दा पनि १२ जनालाई अख्तियारै पठायो । प्रहरी निरीक्षकबाट डीएसपी भएका क्रमशः नरेन्द्र कुँवर, मुकुन्दप्रसाद रिजाल, रूपक खड्का, प्रेमसागर केसी र विष्णुप्रसाद लामिछानेले अख्तियार पाए । उनीहरूको ‘खाली’को कारण नदेखाई ‘अख्तियारको मातहत’ मात्रै भनेर सरुवा गरिएको छ । – अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक